Shabakada Boxoffice India oo maqaal u hibeesay Ruug cadaagii geeriyooday Shashi Kapoor | Filimside.net
Home » Box Office » Shabakada Boxoffice India oo maqaal u hibeesay Ruug cadaagii geeriyooday Shashi Kapoor
Shabakada Boxoffice India oo maqaal u hibeesay Ruug cadaagii geeriyooday Shashi Kapoor
Shabakada Boxoffice India oo ah isha kowaad ee xogaha aflaanta Hindiya laga soo xigto sidoo kalena ah shabakadii ugu horeesay bilaawday soo bandhigida xogaha aflaanta Bollywood-ka ayaa maqaal u hibeesay ruug cadaa Shashi Kapoor oo shalay geeriyooday.
Maqaalka Boxoffice India soo daabacday sidoo kalena shabakada Filimside afkaaga hooyo kuugu soo turjuntay fadlan hoos kaga bogo:
Biloowyin ka hor fanka Hindiya waxaa ka geeriyooday xidig indho u ahaa Vinod Khanna hadana fanka waxaa ka baxay xidig kale oo isagana indho iyo raad raac u ahaa Bollywood-ka iyo guud ahaan fanka Hindiya.
Shashi Kapoor ayaa u geeriyooday kilyo xanuun uu la il darnaa sanadihii ugu dambeeyay wuxuuna jiray 79-sano marka uu geeriyooday maalintii shalay ahayd.
Shashi Kapoor wuxuu shaqada filim jilista bilaabay asigoo caruur ah wuxuuna kasoo muuqan jiray aflaanta qoyskiisa iska lahaayeen wuxuuna kasoo muuqan jiray filimada aabihiis Prithviraj Kapoor ama walaalkiis ka weyn Raj Kapoor hogaamiye ka ahaan jireen.
Shashi Kapoor filimkiisii ugu horeeyay ee uu hogaamiye ka ahaa waa Dharamputra (1962) waxaana Director ka ahaa halyeegii B.R. Chopra laakiin filimkaan inta aan Shashi tiyaatarada loo saarin waxaa uga soo hormaray filimka yar ee uu sameeyay Char Diwari (1961) balse nasiib daro labadiisa filim wey wada guul dareesteen.
Shashi Kapoor xidig saldhigtay (Established Star) wuxuu noqday sanadii 1965 madaama filimkiisii Jab Jab Phool Khile uu siweyn u hirgalay balse kadib ma uusan nagaanin awood ahaan marna sare ayuu u kacaayay marna hoos ayuu u dhacaayay.
Shashi Kapoor wuxuu awood buuxdo ku yeeshay filimkii Chor Machaye Shor ee sanadii 1974 soo baxay kaasi oo Blockbuster noqday.
Filimka Chor Machaye Shor wuxuu sababay in soo saarayaashii ugu caansanaa 70-maadkii ay guriga Shashi Kapoor soo hor dhooban jireen si ay aflaan kaga saxiixdaan waana sababtii keenyay xidigaan in 70-maadkii lacago aad u fara badan inuu kasbado.
Shashi Kapoor aflaan badan oo Hits isku xig xigaan ayuu sameeyay 70-maadkii sidoo kalena si joogto ah wuxuu kaga mid ahaa shanta ilaa lixda atoore ee xiligaas Bollywood-ka ugu awooda badnaa ama aflaanta gadi kareen.
Shashi Kapoor Blockbuster-diisa ugu weyn waa Kranti (1981) iyo Aur Makaan (1974) balse kaligiis hogaamiye kama ahayn waa aflaan atoorayaal kala la jilayeen (multistarrers).
Sidoo kale aflaanta kale ee Blockbusters u noqdeen kuna faano Shashi Kapoor waxaa ka mid ahaayeen Trishul (1978), Suhaag (1979) iyo Deewaar (1975) dhamaantoodana Amitabh Bachchan ayuu la jilay.
Sidaa darteed waxaa suuqa u gashay sawir ahaan inuu yahay Shashi Kapoor atoore caawiye ama mid marwalbo aflaanta hogaamiye labaad ka noqdo.
Balse midaas xaqiiqo ma ahan waayo asigoo kaligiis ah aflaan uu sameeyay ayaa Blockbusters noqdeen waxaana ka mid ah Chor Machaye Shor (1974) iyo Fakira (1978) iyo kuwo kale.
Waayihii fanka Shashi-gii quruxda badnaa sidoo kalena dadka soo jiidan karay si dabiici ah ayuu gacantiisa ugu bur buriyay kadib markii uu isku badalay maal galiye wuxuuna ku qasaaray kana fashilmeen Junoon (1979), Kalyug (1981), Vijeta (1982) iyo Utsav (1984).
Shashi aflaantaan wuu ku lacag beelay sidoo kalena dib dambe soo saarayaasha ama kooxda cajaladaha qeybiyaan uguma soo laabanin wuxuuna lumiyay awoodii uu ahaan jiray talaabo qaldan uu qaaday awgeed.
Shashi Kapoor filimkii ugu dambeeyay ee uu kasoo muuqday wuxuu ahaa Ghar Bazaar (1998) wuxuu ku lahaa muuqaal marti ah waana filim kasoo daahay waqtigiisa.